ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslave Dolecek အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (World Economic Forum-WEF) ၏ အာရှ၊ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Justin Wood အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး “ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး” သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် Deutsche Gesellschaft for International Zusammenarbeit- GIZ ၏ Country Director ဖြစ်သူ Dr. Petra Schill ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် “မြန်မာအထူးစီးပွား ရေးဇုန်ဆိုင်ရာဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး” သို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် “စားသုံးသူအကာအကွယ် ပေးရေးဗဟိုကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၈)” သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပညာ ရည်ထူးချွန်သူ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် သင်တန်းထူးချွန်သူ ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ပွဲ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန (ITC) မှ Adviser ဖြစ်သူ Mr. Charles Roberge ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ